B5B ဘလော့ဂ်အတွက်သော့ချက် ၅ ခု Martech Zone
ယခုအပတ် Webtrends Engage ကွန်ဖရင့်အတွက်တင်ဆက်မှုတစ်ခုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းစဉ်ကတော်တော်လေးတိကျတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလကအရမ်းတိုတယ် (၁၀ မိနစ်)၊ ဒါကြောင့်တင်ဆက်မှုတစ်ကြိမ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုစိန်ခေါ်တယ်! အောင်မြင်တဲ့ B10B Blogging နဲ့စကားပြောဖို့ပြောတယ်
တင်ပြချက်အတွက်ကွဲပြားသောမဟာဗျူဟာ ၅ ခုအထိ Business to Business Blogging မှသော့များကိုကျဉ်းမြောင်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရှေ့တွင်ရှိ။ ဘလော့ဂ်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး အခြားပြိုင်ဖက်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိရမည် ထွက်ရှိအခြားဆူညံသံ။ မင်းဖြစ်ရမယ် ဖောက်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌, သက်ဆိုင်ရာလူမှုကွန်ယက်များ၏ရှေ့မှောက်၌, ပြိုင်ဘက်များ၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များ၏ရှေ့မှောက်၌။ လူများသည်သင့်ကိုတွေ့ရန်စောင့်ဆိုင်း။ မရတော့ပါ။
လမ်းကြောင်းပေးပါ။ သင်၏ဘလော့ဂ်၏စာမျက်နှာတိုင်းသည်ထိရောက်သောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ visitors ည့်သည်များသည်သင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမည်။ ၎င်းတို့သည်သင့်ကိုဆက်သွယ်ရန်အကြောင်းပြချက်များကိုပေးရပါမည်။
အဆိုပါ Sense အစာကျွေး။ လူတွေကဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကိုမဖတ်တတ်ဘူး၊ သူတို့စကင်ဖတ်တယ်။ အချို့သည်လုံးဝမဖတ်ရပါ၊ သူတို့သည်အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံခံကိရိယာများကိုရှာဖွေကြသည်။ သင်မသုံးနေလျှင် အာကာသထဲထိရောက်စွာလုပ်နေတာ အသံနှင့်ဗီဒီယိုခင်ဗျားရဲ့အလားအလာရှိတဲ့ပရိသတ်အများစုနဲ့မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။
သတင်းအချက်အလက်ကိုဖမ်းယူ။ ဘလော့ဂ်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးစွမ်းနိုင်မည့်အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်စိတ်ကူးကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်အနေဖြင့်၎င်းကိုအခမဲ့လုပ်ရန်မလိုပါ။ သင်၏စာဖတ်သူနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစစ်တမ်းကောက်ယူရန်အဆင်ပြေသည်။ whitepapers သို့မဟုတ် webinars ကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များကိုပေးခြင်း မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်.
ဒေါ်လာဖြင့်တိုင်းတာ. စေ့စပ်ထားခြင်း မှတ်ချက်တွေထဲမှာတိုင်းတာမထားဘူး ဒေါ်လာနှင့်ဆင့်အတွက်တိုင်းတာ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါင်းစည်းရန်လိုအပ်သည် analytics သင့်ရဲ့ blogging အားထုတ်မှုများ၏တိကျသောတိုင်းတာခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်သည့် tool ကို။
Tags: b2bb2b ဘလော့ဂ်b2b အကြောင်းအရာထိရောက်မှုFacebook က။
ShareThis သည် Great Application ၏ ၅၀% ဖြစ်သည်
Feet အတွက် Blogging လုပ်လား။ ဒါနနှင့်စျေးကွက်
3:2010 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 46
ကြီးမြတ်အကြံပြုချက်များ။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ blogging ခဲ့ကြပေမယ့်ဘလော့ဂ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ဖြစ်လာသည်နှင့်ငါ့ website ၏ကျန်ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်အဖြစ်လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်းငါ့စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုကိုတကယ်မြင်ကြပြီ။